Is-waafajinta jilicsan ee Nolosha ku timid Noocyada Tubbada ee loo yaqaan 'Kintsu (TM)' oo ay soo saareen Brizo-Jikada Qasabadaha, Tuunbooyinka Faylasha Weelka, Qasnadaha Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Is-waafajinta jilicsan ayaa u timid Nolosha Kintsu (TM) Tubbada kala-soocidda ee Brizo
2020 / 10 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4907 0
INDIANAPOLIS, Oct. 5, 2020 / PRNewswire / - Kintsu™ Kala soocida tubada ee Brizo® isku dheelitirnaanta fudeyd iyo ismaandhaafka, joogteynta xulashada, iyo diidmada sinnaanta. Laga soo jiiday "Kintsugi," farsamo Jabbaan ah oo xubin ka noqoshada walxaha dheriga dillaacsan oo leh dahab, cinwaanka "Kintsu" wuxuu u taagan yahay habka ay qaabka Japandi ugu milmayso laba falsafad naqshadeed oo loogu talagalay bilic naxdin leh.
Mawduucyada xasilloonida waxay soo celinayaan qaabka ugu yar ee quruxda badan ee naqshada Scandinavian-ka, halka ujeeddada joomatariyeyaasha waxyeellada ka soo gaartay dhammaan marinnada isu imaatinku ay yihiin fikradaha Japan wabi-sabi, oo loogu dabaaldegayo sida cajiibka ah ee xilligan xaadirka ah. Tilmaamida fikraddan, Hal-ku-dhigga Musqulaha Musqulaha ayaa kala soocaya noocyo kala duwan oo kala go 'marka qasabaddu dhaqaajiso iyo marka ay furan tahay, halka gacan qabashada baahsan ay astaan ​​u tahay dib-u-maleyn foomka iskutallaabta caadiga ah ee khiyaanada dhismaha.
Isu imaatinku wuxuu muujinayaa ixtiraamka sahayda saafiga ah wuxuuna soo dhaweynayaa muhiimada muujinta qof gaar ah oo leh 5 Knob Deal oo leh xulashooyin, oo ay weheliyaan Hooyooyinka Pearl, La taaban karo, Teak, All-Metallic oo leh naqshad madhan, iyo xulasho la habeeyay oo awood u siineysa gudaha gudaha.
“Tuubbada waa inay ahaataa barta lagu nasto ee uu qofku ka helo xasillooni,” ayaa lagu yidhi Seth Fritz, Brizo® naqshadeeye sare ee warshadaha. “Kintsu™ Tub Assortment wuxuu metelaa isku dhafka saxda ah ee saameynta naqshadeynta si loo abuuro sheeko iyo isdhexgal qurux badan oo ku saabsan dhiirrigelinta Scandinavian iyo Japan, oo bixiya heer dejin ah oo la dhacsan alaab saafi ah oo damaanad qaadi kara qof kasta oo gaar ah inuu helo isku dheelitirnaan qurux badan
Kintsu™ Tub Assortment wuxuu soo bandhigayaa suugaan dhan oo badeecado ah oo lagu xirayo guriga qubeyska oo dhan:
Hal-Deal ee qasabadda
Arc, Xaglo iyo Xullo xulashooyin
Lever, iskutallaab iyo Knob Handles
Laba-Deal oo Ground, Deck iyo Fil Mount tubada buuxisa
Qalabka Feejignaanta Qasab ah ee Aaladda:
Saxanka, Saxanka iyo Khamriga Qamriga
Divert iyo Non-Diverter tubbada
Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska Kalidaa iyo 3 iyo 6- Ku Shaqeeyso Qalab Dhisme ah
TempAssure® Kalluumeysiga Kali Kali ah, Qubays Keliya iyo 3- iyo 6- Ku Shaqee Qalabka Lagu Dhisay Qalabka Wareejinta
Sensori® Goos gooska Thermostatic Valve iyo Goynta Tirada
H2Okinetic® Multi-Operated Wall Mount Showerhead
12 ″ Sq. Raincan Showerhead
Multi-Operate Raincan Showerhead oo leh 6 ″ iyo 10 choices xulashooyinka Gacmaha Qubeyska Mataanaha ah
H2Okinetic® Multi-Operate Bar Bar iyo Wareegyada Xirmooyinka Gacan-qabashada
8 ″ Yar iyo sideed ”Baararka Tuwaalka Mini Pivoting
18 ″ iyo 24 ars Baararka tuwaalka
Hayada Cadka iyo Hilibka Haweenta shelf
Knobs-ka Khaanadaha iyo Jiidida
Bin Knobs iyo Jiidida
Hal-Deal oo ay la leedahay Bidet
Dib-u-habeynta qibrada qubeyska, Kintsu™ Fursadaha kala-soocida tubada noocyo kaladuwan oo heer sare ah, laga bilaabo Handshower Multi-Operate oo leh weji buufis leh, ilaa Multi-Operate Wall Mount Showerhead iyo Multi-Operate Raincan Showerhead cusub-mid kasta oo leh laba nooc oo buufin oo kala duwan oo raaxo leh.
Suudhda intaa dheer waxay meteleysaa kulankiisii ​​ugu horreeyay ee cusub ciyaaryahan® Dhamaadka Onyx, kaas oo keenaya qoto dheer iyo walwal kasta oo loogu talagalay dariiqa murugsan ee quruxda badan. Sidoo kale, isku imaatinka ayaa banaanka ka ah ciyaaryahan® Luxe Dahab®, ciyaaryahan® Luxe Nickel™ iyo dhameeyay Chrome dhameeyay.
Kintsu™ Tub Assortment waxay u egtahay mid la heli karo oo laga dalban karo October 5, 2020 iyada oo loo marayo qolka musqulaha oo tayo sare leh dalka oo dhan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Brizo® alaabada jikada iyo barkadda qubeyska ama in la helo alaab-qeybiye.
Marka laga hadlayo Brizo® model
Brizo waa moodel rakiban oo raaxo leh oo loogu talagalay shakhsiyaadka u arka in qaabkani kaliya uusan khusaynin dharka ay xidhaan - waa qaab nololeed. Shaqaalaha Brizo waxay naqshadeeyaan oo farsamooyin ka sameystaan ​​jikada iyo qolalka musqusha oo si farshaxan ah isugu dhafan nooc iyo wax qabad, maskax shaqeysa, jawi iyo aagag. Qaabkani wuxuu sare u qaaday qaabka Brizo iyo uruurinta moodada, kuwaas oo badankood ay qireen tafaariiqleyda kala duwan iyo ururada, oo ay weheliso Design Journal oo ay weheliso Adex Gold Award™ iyo Abaal Marinta Dulli™. Ku xididaysan qaabka iyo naqshadeynta, qaabka Brizo wuxuu kafaala-qaade weyn u ahaa dharka-sameeyaha Jason Wu laga soo bilaabo 2006 iyo kafaala-qaade waddanka oo dhan ah 'St. Jude Dream Raadinta'® Bixinta tan iyo 2010. Brizo waa nooca raaxada leh ee rakibidda iyo qalabka ku jira galka Delta Faucet Firm, WaterSense® soo-saare shirkad ka ah Shirkadda Badbaadada Deegaanka ee Mareykanka. Brizo badeecadda waxaa laga heli karaa keliya iyada oo loo marayo jikada tayada sare leh iyo musqulaha qubeyska. Macluumaad dheeri ah ama si aad u hesho qol bandhig, u tag ama magacaw 877-345-BRIZO (2749).
Hyperlinks hantida dheeraadka ah
Hore:: Si loogu rakibo tubbada darbiga-darbiga jikada waxay u baahan tahay in fiiro gaar ah la yeesho Next: Lacagta qolka nasashada waxay dooran kartaa nooca qasabada